Google Vision zvinyorwa neWPSOLR
WordPress yekutsvaga plugin ye
Elasticsearch, Solr, Algolia
Rwendo rwako rwekugadzirira, nhanho nhanho
Swiftype (munguva pfupi)
Addons (plugins, themes, maitiro)
musha » Rwendo rwako rwekugadzirira, nhanho nhanho » Wedzera-ons » AI Image uye maOCR APIs anowedzera-on » Google Vision
718 maonero 0 January 22, 2021
Chii chinonzi "Google Vision" API?
Google Vision api ndeye advanced AI iyo inogona kuona zvakawanda zvinhu mumifananidzo. Inogona kuona kumeso uye kuverenga zvinyorwa mumifananidzo. Inogona kunyange kuziva vane mukurumbira. Google Vision inogona zvakare kuisa mifananidzo muzvikamu zvakasiyana. Yakasanganiswa neWPSolr, Izvi zvinogona zvakanyanya kugadzirisa mashandiro ekutsvaga pawebhusaiti yako sezvo izvozvi zvese zvinyorwa nemifananidzo zvinoshandiswa neWPSolr.
Gadzira chirongwa cheGCP nemvumo yeGoogle Vision API
Kuti utange neGoogle Vision API unofanirwa kutanga wabatana neGoogle Cloud Dashibhodhi.
Tsvaga "api dashboard" uye sarudza "Dashboard (APIs & Services)".
Wobva wadzvanya pane "Gonesa APIs neMasevhisi".
Tsvaga "chiratidzo" muhwindo idzva, wobva wasarudza "Cloud Vision API".
Dzvanya pa "Enable".
Wobva wasarudza "Credentials".
Dzvanya pa "Gadzira Zvivimbiso" wobva wasarudza "Service account".
Zadza Service account account.
Unogona kusarudza basa reakaundi yako yebasa asi kana usina chokwadi chaunoda chaizvo ingosiya zvigadziriso zvekutanga.
Iwe unogona kungodzvanya pane "Kuitwa" pano futi.
Rongedza iyo Service account.
Dzvanya pa "Wedzera kiyi" wobva wasarudza iyo JSON Kiyi mhando.
Iko kiyi inozochengetwa pakombuta yako.
Iwe unogona kuvhura kiyi mune yako yaunofarira sosi kodhi mupepeti kana IDE.
shandisa iyo WPSOLR plugin wobva waisa rezinesi. Iwe unogona ikozvino kugadzira index.
Enda ku "Unganidza yako indexes" uye sarudza yako yaunofarira sarudzo. Ndiri kuenda kugadzira index yekuyedza.
Wobva wagadzira yemahara bvunzo index.
Shandisa WPSOLR Google Vision API kuwedzera
Kuti uite kuwedzerwa enda mu "Activate extensions".
sarudza "Chinyorwa, Mufananidzo, Vhidhiyo AI".
Dzvanya pa "Activate iyo AI yekuwedzera" bhokisi rekutarisa uye sarudza Sevha Sarudzo.
Gadzira iyo Google Vision API
Dzvanya pane "Wedzera AI" nhanho kubva pamufananidzo uri pamusoro.
Wobva wazadza ruzivo rwakakodzera. Ive neshuwa yekudzvanya pa "iyi ai_api ichafanotangisa-kuita indexed zvinyorwa". Unogona kutarisa sarudzo dzaunoda pazasi peJSON kiyi sekutora zvinyorwa kubva kumifananidzo semuenzaniso. kana uine matambudziko nekutsvaga kwako gare gare ungangoda kuti uchinje danho rekuvimba. Kunyora 0 (zero) kunogona kugadzirisa nyaya idzi.
Gadzira iyo WPSOLR yekutsvaga
Dzvanya pane "Tsanangura kutsvaga kwako ne 'yako_index_name'", uye tinya pane Iyo "Tsvaga" bhokisi rekutarisa.
Gadzira iyo Google Vision minda kune index
Dzvanya pa "Dhata" mune yepadivi uye sarudza iyo data iyo yaunoda kunongedza.
Sarudza mhando dzezvinyorwa iwe zvaunoda kunongedza. Google Vision inogamuchira chete jpeg, jpg, png, gif, bmp, webp, mbishi, ico, pdf uye tiff mifananidzo.
sarudza minda yaunoda. Unogona kusiya default minda kana iwe usingazive chekusarudza.
Gadzira Google Vision minda kuti ishandise se mafirita
Sarudza iyo minda iwe yaungade kushandisa se mafirita.
Tumira Dhata kunongedzera
Dzvanya pa "Index yakasarudzwa posvo mhando mune index 'Test index kubva kuElastic Cloud'".
Wedzera WPSOLR maficha widget kune yako yekutsvaga padivi
Gadzira chinyorwa pamwe nemamwe mapikicha anonakidza ekubvisa
Ita yekutsvaga uye ushandise yakatorwa minda semafuta
YITH WooCommerce Ajax Tsvaga wedzera-on
Embed Chero Gwaro wedzera-on
PDF Embedder kuwedzera-on
Wedzera Zvese Collapse All
Chii chinonzi WPSOLR?
Iyo yakajairika WordPress SQL yekutsvaga
Iyo WPSOLR yekutsvaga neElasticsearch, Apache Solr, kana Algolia
Isa Apache Solr
Yakabata Apache Solr uye SolrCloud Services
Gadzira zvinyorwa zvako
Gadzira bvunzo Apache Solr index
Gadzira bvunzo Elasticsearch index
Gadzira iyo Apache Solr index
Gadzira indexStax SolrCloud index
Gadzira indasitiri yeElasticsearch index
Gadzira indekisi yeAlgolia
Gadzira indekisi yeElasticsearch
Gadzira iyo Opensolr Solr index
Gadzira Qbox Elasticsearch index
Gadzira iyo ElasticPress Elasticsearch index
Gadzira iyo Aiven Elasticsearch index
Gadzira iyo Bonsai Elasticsearch index
Gadzira iyo Amazon AWS Elasticsearch index
Gadzira iyo ObjectRocket Elasticsearch index
Gadzira iyo Cloudways Elasticsearch index
Gadzira iyo Alibaba Cloud Elasticsearch index
Gadzira Rondedzero Elasticsearch index
Unganidza kune Apache Solr index
Batanidza kune indekisi yeElasticsearch
Yoast SEO inowedzera-on
Zvese mune Imwe SEO yekuwedzera
Yepamberi Scoring yekuwedzera-on
Cron Kuronga kuwedzera-on
Radiobox & Bhokisi bhokisi Rokuita
Nhamba Yakagadzika Ruwa
Ruvara Picker Kuiswa
Range Slider Rutivi
Wedzera Ajax kuChiratidzo chazvino
Kuita taxonomy hierarchies
Tsika Nzvimbo CSS
Pata anopfuura anopfuura mumwe Elasticsearch kana Solr index
AI Natural Mutauro APIs wedzera-on
Google Natural Mutauro
Aylien Chinyorwa Kuongorora
Qwam Chinyorwa Ongorora
Mhando dzematurusi wedzera-on
AI Image uye maOCR APIs anowedzera-on
Muchinjikwa-domain kutsvaga kuwedzera-on
Dhairekitori + rekuwedzera
Toolset Views inowedzera
Query Monitor wedzera-on
© 2020 wpsolr.com. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.
Goverana pane reddit